Yaa ka danbeeyay Dilka Cali Markuus 'Xog buuxda?
Friday August 09, 2019 - 18:19:25 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Warar dheeriya oo laga helaayo dil magaalada Baydhabo loogu geestay ganacsadaha caanka ah Cali Aadan Xuseen (Cali Marguus)saaka beer uu ku lahaa deegaanka Maaya Fuulka ee duleedka Baydhabo.
Ciidan ilaalo u ah Ilyaas Cali Nuur ayaa la xaqeejiyay in saakay Ganacsade Cali Markuus ay ku dileen Beertiisa. taasi oo aan la ogeyn sababta ka danbeysa waloow Maalmahii ugu danbeeyay Gobalka Baay ay ka jireen dilal la xariira aanoyin Qabiil.
siyaasi hore iyo mid ka mid ah dadka hal doorada sida weyn looga yaqaanay deegaanada Bay iyo Bakool, tobankii sano ee u dambeeyay kuma lug laheyn wax siyaasad ah.
Beerta uu ku lahaa duleedka Baydhabo ayaa loo dalxiis tagi jiray, waxaa ku beernaa dalagyo kala duwan sida khudaarta, sidoo kale dhaqashada xoolaha ayaa qeyb ka ahaa howlihii uu waday ee la xiriiray dhaqanka iyo wax soo saarka beerahaba.